တစ်ခွန်းစကား (တာရာမင်းဝေ) | PoemsCorner
In: ကဗျာ,တာရာမင်းဝေ Posted By: poemscorner Date: May 18, 2010
သက်ပြင်းလောင်းသံ ( တာရာမင်းဝေ)
Leave comment 42 Comments & 20,351 views
ဆရာတာရာမင်းဝေကို အရမ်း သဘောကျတယ် ဆရာလိုလူတော်ကြယ်ပွင့်တစ်ယောက် လောကကြီးက အစောကြီးထွက်သွားရတာ လောကကြီးမှာ ထွန်းလင်းနေတဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ယုတ်လျော့သွားသလိုမျိုး စာပေလောကအတွက် နှမျောမိတယ်
By: apollo at Jan 21, 2011
By: E-than at Mar 1, 2011
သူငယ်ချင်း ပြောမလား မိတ်ဆွေ ပြောမလား မင်းနဲ့ ငါ ပြောမလား သင်းဆရာပြောမလား ဟိုးဗျာ သူဟာ ကျွှန်တော်တို့ လူငယ် တွေ့ အတွက်တော ကဗျာ အားဆေးဘဲ သူ့ ရဲ့ ခန္ဓာမရှိပေးမဲ့ သူပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာနဲ့ စာတွေကတော လူငယ်တွေ နဲ့ကဗျာချစ်သူ စာချစ်သူတွေ အတွက်ကတော့ဘယ်တော့မှ မစိတ်သုန်းစေရဘူးဗျာ၊အမြဲလင်းလက် ၊ထွန်းလင်းတောက်ပစေရ မည်။
By: အောင်နိုင်ဦး at Apr 11, 2011
By: အာနိုး at Apr 11, 2011
By: Moe Thit Lay Pyay at Apr 23, 2011
its mean heat beat
By: john min at May 4, 2011
By: မှုံရွှေရည် at Jun 6, 2011
By: ညီငယ်၏ at Aug 16, 2011
By: G.T13 at Aug 19, 2011
By: myatthuraaung at Aug 27, 2011
ဆရာ့အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဂုဏ်ပြုပါရစေ …..
. ” နတ္ထိ ”
ကမ္ဘာ စ လယ် ဆုံး
ရေး — ရှားမောင်မောင်
By: Shah Mg Mg at Sep 2, 2011
By: hunter at Sep 5, 2011
ကဗျာကောင်းတွေ ကြားမှာ ကောင်းသောကဗျာတွေ
By: မိုးကြိုး at Sep 5, 2011
ဆရာ ရဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ
By: monsoon at Sep 14, 2011
တာယာမင်းဝေလို. ဘယ်စိတ်ကူးနဲ.များ ကင်မွန်းတတ်လိုက်သလဲဗျာ
By:ိစိုးထက်လင်း(စိတ်ပညာ) at Oct 27, 2011
ဆရာ.ကိုအမျှပေးလိုက်ပါတယ်… အမျှပါဆရာ ..အမျှ ..အမျှ
By:ိစိုးထက်လင်း(စိတ်ပညာ)မုံရွာ တက္ကသိုလ် at Oct 27, 2011
By: yaewintaung at Oct 29, 2011
By: ချစ်မိုးဦး at Nov 14, 2011
ဆရာကို အရမ်းသတိရနေမိတယ် တစ်ခါတလေ အလွမ်းတွေနဲ.ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ ဆရာ့ကဗျာလေးတွေကိုတမ်းတမိပါတယ်
By: sokhantko at Nov 22, 2011
By: Athan at Dec 3, 2011
For Man May Come and Man May Go,
But , I Go On Forever.
By: Aye win at Dec 8, 2011
အကြွေစောတဲ့ ကဗျာဓါးသွားတစ်လက် (ကဗျာ=စာပေအားလုံးကို ရည်ညွှန်းပါသည်.)
ကျွန်တော် ဘ၀မှာ ဆရာရဲ့စာပေတွေဖက်ရတဲ့အချိန်က
By: ဥာဏ်လင်းအောင် at Feb 4, 2012
ဘ၀မှာ အသေချာဆုံးက သေခြင်းတရာပါပဲ တဲ့…
By: gadounlay at Feb 13, 2012
By: nadi at Feb 27, 2012
ကဗျာကောင်းကင်ကြီးထဲက ကြယ်တစ်ပွင့်မြေ,ခ ခိုက်မှာ ယောင်ယမ်းပြီးမျက်ရည်ကျမရတယ် ………လွမ်းလိုက်ရတာ အနေအထိုင်မတတ်တဲ့ကြယ်လေးရယ်…………ဒီတူးဆစ်တောင်ငူ
By: D26 at Mar 2, 2012
By: littlebird at Mar 23, 2012
By: naihtuaung at Mar 25, 2012
By: aung koko win at Jun 1, 2012
By: Tin Myo Naing at Jul 6, 2012
By: dozet at Jul 9, 2012
ဆရာ့ ရင်ဘတ်ကိုလေးစားလျှက်…ဘယ်သူ့ဆီမှာရှိဦးမှာလဲ ဒီလိုရင်ဘတ်မျိုး… ဆရာ့ရင်ထဲက ကဗျာတွေသုံးဆောင်ခွင့်ရတာ …ဘယ်သူတွေ ဒီလိုမျိုး သုံးဆောင်ခွင့်ပေးဦးမှာလဲ … ရင်ထဲကမွတ်သိပ်မှု ဘယ်သူ နှစ်သိမ့်ဦးမှာလဲ… ငါဟာ ကဗျာ ဆာလောင်နေသူပါ…
By: ရေပေါ်သား at Jul 30, 2012
အားလုံးကို ခင်ပါတယ်ဗျာ။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
By: ကျော်ဇင်သန်း at Aug 4, 2012
By: lwannaythu at Aug 18, 2012
ကဗျာတွေရေးရင်း ကဗျာဖြစ်သွားတဲ့ လက်တစ်စုံ…ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး….
By: nyeint zynn wah at Oct 30, 2012
By: mr.black at Nov 1, 2012
By: ပြည့်ဖြိုးထွန်း at Nov 7, 2012
By: လောမဟံ at Nov 15, 2012
ကိုယ်အတွက်. . . . .. . . .
နှင်းဆီ သစ်ပင်တွေ အရိပ်ကိုင်းကိုင်း ထင်းရှူးပင်တွေလည်းမစိုက်ပါနဲ.။ ။
ကိုယ်အပေါ်မှာ စိုယိမ်းနေပါစေ ။
ဒါမှမဟုတ် မေ.ရင်လည်းမေ.လိုက်ပါ။ ။
သူဆိုလည်း ကိုမကြားနိုင်တော. ……………။
.မေ.ရင်လဲမေ.သွားလိမ်.မယ် ကွယ်………။။ ။
By: ချမ်းအေးအောင် at Nov 15, 2012
ကောင်းတယ် ကိုချမ်းအေးအောင် ကျေးဇူး ကျွန်တော် ဒီကဗျာလေးကို စာမရိုက်ရသေးဘူး.။
ကျေးဇူးပါ facebook မှာ share လိုက်မယ်နော်
By: 13th at Dec 8, 2012
By: ဗိုလ်ရှိန်း လှည်းကြောင်းပေါက်သား at Dec 25, 2012